Itti Aanaa Prezidaantiin Zimbaabwee Duraanii Maaliin Beekamu Turan
Sadaasaa 22, 2017
Waggoota 37f Emmerson Mnangagwa harka mirgaa Roobert Mugaabee fi hedduu amanamoo turan. Mananga-gwan jalqaba waggaa kanaa Zimbaabwee waaltaa keessatti hiriira paartii ZANU-PF irratti argamanii turan.
ZANU-PF paartii eebbifamaa dha jechuun jamaa wal ga’etti himan. Hoogganuu itti fufa. Kanneen nutti dutan hojii isaanii itti fufu ZANU-PF garuu aangoo irra tura. Mugaabee waliin fuula duratti. ZANU-PF waliin fuula duratti jechuun dhaadatan.
Baatii xiqqoo keessatti jijjiiramni dhufe kuno. Yeroo ammaa kan aangoo irraa fonqolchaman kan lola Zimbabween walabummaaf geggeessite keessatti tooftaa ripxe loltummaa raawwataniif maqaa “nacha” jedhuun beekaman itti aanaa prezidaant Mananga-gwa Mugaabeen aangoo irraa akka bu’an kan gaafatan keessaa isa duraa ti.
Torban darbe, waraanni biyyattii Mugaabeen akka manaa hin bane ugguruu dhaan Mnanga-gwa-n aangootti akka deebi’an gaafate Mugaabeen fedhii dhaan aangoo akka gad dhiisan gaafate.
Mugaabeen jalqaba baatii kanaa amanamummaa irraa dhabuu dhaan qeeqan. Sochiin isaanii kunis Mugaabeen aangoo Mnanga-gwaan gad dhiisan haadha warraa isaanii uummata biratti hagas fudhatama hin qabaanne kan umuriin waggaa 52 Grace Mugaabeetti dabarsuuf carraa akka kenneefitti fudhatame.
Mnanga-gwaan erga bara 1980 qabee aangoo kaabinee adda addaa kan akka hoogganaa dhaaba basaasaa ta’uun hojjetaniiru. Dhuma irratti bara 2014 itti aanaa prezidaantii ta’uun moggaafaman.
Moggaafamuun isaanii kun paarticha gidduu kan ture qabsoo aangoof jiru hadhaa’aa tasgabbeesse. Waldaa gadamoojjiwwan waraanaa beekamaa kan hooggananiif Mnanga-gwa ka deggeran chris Mutsvan-gwa akka jedhanitti dinagdeen biyyatti daddaaqamuun hanqina hooggana garee ga’eessota haadha warraa Mugaabeen hoogganamuu ti jedhan.
Haa ta’u malee Mnanga-gwaan amma qilleensa gaarii hafuura baafatan jechuu dhaa? Hayyoonni Zimbaabwe battala fixiinsa waraanaan hoogganame kan mormitootaa siyaasa fi gosootaaf itti gaafatamoo ta’uu hubatan. Aangoo irraa darbamanis hagas beekamoo hin taane, garuu kaleessa ibsa kennaniin mootummaa Mugaabee, malaammaltummaa, dandeettii dhabuu, itti gaafatamamummaa dhabuu, dhibaa’ummaa, dhimmi hawaasummaa fi aadaa gad adeemaa deemuu isaan himatan. Hedduun garuu qeeqi kun maaliif amma ta’e jechuun gaafataa jiran.